Saraakiil Mareykan Ah oo Lagu Dilay Duleedka Muqdisho Iyo Al-Shabaab oo Mas’uuliyadda Sheegtay. – Shabakadda Amiirnuur
November 14, 2017 3:27 pm by admin Views: 115
Kolonyo gaadiid ah oo ay leeyihiin ciidamada shisheeye islamarkaana galbinayay saraakiil Mareykan ah ayaa duhurnimadii maanta lala beegsaday weerar naf hurnimo ah kaasoo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur gaadiid.
“Walaalow waxaan arkayay gaari mar qura dhex galay kolonyada kadibna geystay qarax weyn oo aad u weyn durbadiina annagu waan kala cararnay haddaan nahay dadkii goobta ka ag dhawaa waxaana iigu miriq dambeysan gaari aad u burburay oo u muuqday kan la beegsanayay walo kuwa kale ay wax yeello soo gaartay” sidaasi waxaa yiri’ nin ka ag dhawaa halka ay wax ka dheceen.
Sida laga soo xigtay idaacadda Andalus, Xarakada Al-Shabaab ayaa war kasoo saartay weerarkan waxaana ay xaqiijisay in ay ku dishay 5 sarkaal oo Mareykan ah, waxaana xusid mudan in markii uu qaruxu dhacay kadib wadada la xiray muddo saacado ah sababo la xiriira meydadka saraakiisha Mareykanka oo la daabulayay.
Sidoo kale weerarka ayaa waxaa ku dhintay askar ka tirsan kuwa Amisom, saasoo ay tahayna saxaafaddu waxa ay tabineysaa dhimashada saraakiisha Mareykanka taasoo muujineysay in laga daalay warinta wararka la xiriira khasaaraha ciidamada shisheeye oo joogto ka noqday dalka Soomaaliya.
Illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Mareykanka iyo ta